यी मेहनती नारीहरु : जो आफ्नै पौरखमा अर्बपति भए ! - Laghubittanews.com
यी मेहनती नारीहरु : जो आफ्नै पौरखमा अर्बपति भए !
लघुवित्त न्यूज विशेष / बिजनेसको दुनियामा आज महिलाको पनि उत्तिकै ठुलो सहभागिता छ । विश्वमा त्यस्ता धेरै महिला छन् जसले ठूलो व्यवसाय निर्माण गरेका छन् । यी महिलाहरू अरबौं खरबौका मालिक भएर रहेका छन् । यसका साथै उनीहरू सौन्दर्यको हिसाबले पनि कुनै सेलिब्रटी भन्दा कम छैनन् । यी महिलाहरू मध्ये धेरै त्यस्ता छन् जसले आफ्नो पारिवारिक व्यवसाय सम्हालेका छन् र एक सफल महिला उद्यमी भएका छन् ।
केही महिलाहरूले आफ्नै मेहनतको साथ व्यवसायको दुनियामा आफ्नो छुट्टै स्थान बनाएका छन् । यीमध्ये केही महिलाहरू ठूला राजनीतिज्ञका परीवारका पनि छन् भने केहि ठूला उद्यमीका पत्नीहरू पनि छन् । यसमा केहि त्यस्ता महिलाहरू समावेश छन् जसले बुढो भए पनि आफ्नो जागिर छोडेनन् र सफलताको उचाइमा पुगे । यहाँ केही सफल व्यवसायी महिलाहरूको बारेमा उल्लेख गरीएको छ जसले सफलताको एक ज्वलन्त उदाहरण बनाए । यी अरबपति महिलाहरूको जीवनशैली पनि ग्ल्यामरस छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पले पराजय भोग्नु परेको छ । डोनाल्ड ट्रम्प एक अनुभवी राजनीतिज्ञका साथै एक ठूला र सफल व्यापारी हुन् । उनको व्यवसाय संसारभर फैलिएको छ । डोनाल्ड ट्रम्पकी छोरी इवान्का ट्रम्पले उनको परिवारको व्यवसाय सम्हाल्छिन् । उनको नाम संसारको ठुलो बिजनेस वुमन्समा समावेश छ । डोनाल्ड ट्रम्पसँग यति धेरै सम्पत्ति छ कि उनकी छोरी इवान्का ट्रम्पले केहि गर्न आवश्यक थिएन । तर उनी आफैंमा एक सफल बिजनेस वुमन बनिन् । उनी आफ्नो बुबा डोनाल्ड ट्रम्पको धेरै व्यवसाय हेर्छिन् । यसका साथै, इवान्का अमेरिकी टिभी च्यानलहरूमा पनि देखा पर्छिन् । इवान्का ट्रम्पले केहि पुस्तकहरू पनि लेखेकि छिन् ।
इवान्का ट्रम्पले व्यवसायसँग सम्बन्धित जिम्मेवारी सम्हाल्नुका साथै आफ्नो बुबा राष्ट्रपति हुँदा डोनाल्ड ट्रम्पसँग कूटनीतिक भेटमा समेत सरीक हुन्थिन् । उनी एक सफल उद्यमीका साथै कुशल वक्ता पनि हुन् । उनी समाज कल्याणका धेरै कामहरूमा सामेल हुन्छिन् । उनले गरिब बच्चाहरूको शिक्षाका लागि पनि काम गरेकि छिन् ।
पेन्सी हो प्रसिद्ध करोडपति स्टेनले हो को छोरी हुन् । पेन्सी हो उनको परिवारको १७ सन्तानमा सबैभन्दा धनी हुन् । यति मात्र होईन, एक व्यवसायिक महिलाको रूपमा, उनी अब आफ्ना बुबा भन्दा पनि धनी छिन् ।
क्यारी एक प्रसिद्ध अमेरिकी व्यापारी हुन् । उनी मनोरन्जन व्यवसायसँग सम्बन्धित छिन् । सन् २००६ मा उनको पतिको मृत्यु पछि उनले आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न कडा मेहनत गरिन् । हाल उनी आफ्नो छोरासँगै अहिले व्यवसाय चलाउँछिन् । यसको साथै, उनी च्यारीटिमा पनि धेरै योगदान दिन्छिन् ।
मार्गारीटा फ्रान्सकी एक धेरै धनी व्यवसायिक महिला हुन् । उनले आफ्नो पतिको मृत्यु पछि उनको व्यवसाय विस्तार मात्र गरीनन्, एक व्यवसायिक समूहको अध्यक्ष र फुटबल टीमको मालिक्नी पनि भइन् । मार्गारिटा एक सफल हुनुका साथै ग्ल्यामरस पनि छिन् ।
चार्लोट प्रसिद्ध अमेरिकी अभिनेत्री ग्रेस केलीकी नातिनी हुन् । उनी आफ्नो हजुरआमा जस्तै सुन्दर छिन् । पत्रकारका साथ साथै उनी मनोरन्जनको व्यवसायमा संलग्न छिन् । उनले आफ्नो व्यवसायलाई धेरै अघि बढाएकि छिन् । उनलाई घोडा सवारी पनि ज्यादै मन पर्छ ।
क्रिस्टी वालमार्टका संस्थापक साम वाल्टनकी बुहारी हुन् । उनको श्रीमानको मृत्यु भइसकेको छ । कुनै समय क्रिस्टी विश्वको सबैभन्दा धनी महिला थिइन् । आज पनि उनीसँग असीम धन छ । उनी वालमार्टको व्यवसायसँग सम्बन्धित रहेर कम्पनीमा धेरै महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू सम्हालिन् । उनको जीवनशैली एकदम साहसी र ग्लैमरस रहेको छ । क्रिस्टी अझै पनि परोपकार कामसँग सम्बन्धित छिन् ।
आइरिसले आफ्नो सम्पत्तिको एक ठूलो हिस्सा आफ्नो पतिबाट पनि प्राप्त गरीन् । उनी चिलीको सबैभन्दा धनी महिला हुन् । आइरिससँग धेरै कम्पनीहरूको स्वामित्व छ । आज उको उमेर ७४ बर्षको भयो । तर यस उमेरमा पनि उनी आफै व्यवसायको व्यवस्थापन गर्छिन् ।
विश्वको सबैभन्दा ठूला टेक कम्पनीहरु मध्ये एक, एप्पलका संस्थापक र सीईओ, स्टीव जब्सकी श्रीमती लरेन आफ्नो पति जस्तै लाइमलाइटमा हुन्छिन् । उनको श्रीमानको मृत्यु पछि पनि उनी यस व्यवसायसँग सम्बद्ध छिन् । लरेनसँग प्रशस्त धन छ । एप्पलमा उनको धेरै सेयर छ । उनी पनि व्यवसायसँगै च्यारीटीमा समेत समावेस छिन् ।
सुसन ब्रिटेनको एक ठुलो फार्मास्यूटिकल कम्पनीको प्रमुख हुन् । यसका साथै उनी र उनका भाईको BMW कम्पनीमा धेरै सेयर छ । उनी विश्वका धनी महिलाहरु मध्ये एक हुन् । उनी आफ्नो ग्लैमरस जीवनशैलीका लागि पनि परिचित छिन् ।
एलिस वाल्टन वालमार्टका संस्थापक साम वाल्टनकी छोरी हुन् । उनले वालमार्ट कम्पनीसँग सम्बन्धित धेरै जिम्मेवारीहरू निभाउछिन् । एलिस वाल्टनलाई आर्टसँग ज्यादै लगाव छ । उनको व्यक्तिगत आर्ट संग्रह धेरै महँगो छ । एलिस वाल्टन पनि संसारकै धनी महिला मध्ये एक हुन् ।
९४ वर्षिय लिलियंसको नाम विश्वको धनी महिला मध्ये एकमा आउँछ । उनी प्रसिद्ध ब्रान्ड लोरीयलको प्रमुख सेयर होल्डर मध्ये एक हुन् । यस उमेरमा पनि उनी कडा मेहनत गर्छिन् । उनी पनि आफूलाई फिट र मेन्टेन राख्छिन् ।
लघुवित्त कर्जाबाटै निर्धक्क जीवन अनि आफ्नै कमाई (गगन मायाको कथा)
मेहनती लघुउद्यमी पुष्पाले यसरी पाइन सफलता